စနေ၊တနင်္ဂနွေတို့ရဲ့ အလှဆုံး နိဗ္ဗာန်ဘုံလေး (သို့) "Cafe's DiBar" တို့ရဲ့ ကမ္ဘာ
စနေ၊တနင်္ဂနွေတို့ရဲ့ အလှဆုံး နိဗ္ဗာန်ဘုံလေး (သို့) “Cafe’s DiBar” တို့ရဲ့ ကမ္ဘာ
20 Feb 2018 . 5:39 PM
ကိုယ်က Classical Art တွေထဲ မျောပါတတ်သူလား?
Retro, Vintage Style တွေကို ရူးသွပ်သူလား?
သမာရိုးကျ စနေ၊ တနင်္ဂနွေတွေကြားမှာဘဲ ဘဝကို မြုပ်နှံထားသူလား?
ဒါဆိုရင်တော့ ဒီစာလေးကနေပဲ ရန်ကုန်မြို့ထဲကနေ Vintage အငွေ့သက်တွေ ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ အီတလီကော်ဖီဆိုင်လေးတွေ ကိုခေါ်သွားပါရစေ။
နံရံကပ်ပန်းချီကားလေးတွေ၊ ရှေးခေတ် အင်္ဂလိပ်ကြော်ငြာစာရွက်လေးတွေ၊ ပန်းခြောက်တွေ၊ အိမ်သုံးလက်မှုပစ္စည်းတွေ၊ Cheeseတွေ၊ ဖန်ပုလင်းလှလှလေးတွေ၊ ပန်းတွေ၊ Pasta တွေနဲ့ Wine ချိုမြမြတွေက ကိုယ် ရန်ကုန်မှာရှိနေတာပါလားဆိုတာကို ခနမေ့သွားမိစေလောက်အောင် ညို့ငင်နေမယ်ဆိုရင်ရော?
ရန်ကုန်က ကော်ဖီဆိုင်တွေထဲကမှ အလှဆုံး၊ အနုပညာအဆန်ဆုံးနဲ့ ဆိုင်ခွဲ ၃ ခုထိအောင်အောင်မြင်မြင်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့တဲ့ Cafe Dibar ဟာဆိုရင် ကော်ဖီချစ်သူတွေ၊ Vintage ဆန်ဆန်လူနေမှုမြတ်နိုးသူတွေကြားထဲမှာ တစတစ လွှမ်းမိုးနေရာယူလာခဲ့တာ ခုဆိုရင် နာမည်တစ်ခုနဲ့ အခိုင်အမာရပ်တည်လာနိုင်ခဲ့တဲ့အထိပါပဲ။
pasta wine pizza espresso
ဆိုင် ၃ဆိုင် ဖြစ်တဲ့အလျောက် နေရာအနေအထား အနည်းငယ်ကွာခြားပေမယ့် အပြင်အဆင်ကတော့ အားလုံး Theme တစ်ခုတည်းအောက်မှာ အနုပညာဆန်ဆန် ဖန်တီးထားတာ အံ့ချီးဖွယ်ရာပါပဲ။
Cafe Dibar (1)
ပထမဆုံး ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ ဆိုင်ကတော့ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းနဲ့ ကန်ဘဲ့လမ်းထိပ်ကဆိုင်လေးဖြစ်ပြီး လမ်းမတန်းပေါ်မှာ ဖြစ်လို့ အစည်ကားဆုံးနဲ့ အစားအစာ အစုံလင်ဆုံးဆိုင်လေးပါ။ အရင် တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းကနေ ပြောင်းလာတာဖြစ်ပြီး အီတလီနဲ့ European အစားအစာအစုံအလင်ကို ရနိုင်တဲ့ဆိုင်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ တခြားဆိုင်လေးတွေနဲ့မတူတာက လူကြီိးမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေ၊ နိုင်ငံခြားသားတွေ အလုပ်ကိစ္စနဲ့ တွေ့ဆုံကြ၊ စုစည်းကြတဲ့ နေရာလည်း ဖြစ်ပါသေးတယ်။ အားသာချက်ကတော့ ဆိုင် ၃ ဆိုင်လုံးမှာ Menu အစုံလင်ဆုံးနဲ့ လမ်းမတန်းပေါ်မို့ လာရအဆင်ပြေပြီး အားနည်းချက်အနေနဲ့ဆိုလူစည်တတ်ပြီး နေ့လည်ခင်း အချိန်တွေတော့ လူနည်းနည်းပြည့်နေတတ်ပါတယ်။
လူငယ်တွေကြားထဲ ပျံ့နှံ့လာခဲ့တဲ့ ဆိုင်လေးတွေကတော့ စမ်းချောင်း၊ ပန်းခြံလမ်းထဲက Cafe Dibar နဲ့ မြေနီကုန်း ဓမ္မာရုံလမ်းထဲက Cafe Dibar တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Cafe Dibar (2)
ဒီဆိုင်လေးကတော့ စမ်းချောင်း၊ ပန်းခြံလမ်း၊ အမှတ် ၁၇ မှာတည်ရှိပြီး မျက်နှာကျက်နိမ့်နိမ့်လေးနဲ့ ၂ထပ်အိမ်ပုံစံလေး အလှဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ လူငယ်တွေ သဘောကျကြတဲ့ ဆိုင်လေးဖြစ်ပြီး မူလဆိုင်ထက်တော့ Menu နည်းနည်းလျော့ထားတာမို့ Pasta၊ Pizza နဲ့ Salad တွေ၊ Wine တွေ၊ Juice တွေကို အဓိက ထားရောင်းပါတယ်။
Cafe dibar 2
ဆိုင်အပြင်အဆင်လေးက ဝင်တဲ့သူတိုင်း ငြိလောက်မှာ အသေချာပါ။ Modernism ဖြစ်တယ်။ Classic ဖြစ်တယ်။ လုံးဝသေချာပေါက်အာမခံနိုင်တာကတော့ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ပြီး လွင့်လို့ကောင်းမယ့်နေရာပါပဲ။ စာသမား၊ ကဗျာသမားတွေ အတွေးတဆုံးဖြန့်ကျက်လို့ရမယ့် နေရာလှလှလေးပါ။
အစားအသောက်အတွက်ဆို နေရာလေးက နိုင်ငံခြားသားသဘောကျ နေရာလေးဖြစ်နေတဲ့အပြင် ဆိုင်ရဲ့ Culture ကိုက အီတလီကဖေးပုံစံလေးမို့ အီတလီစာတွေ Pasta ၊ Wine နဲ့ Drinks တွေတော်တော်များများ ရပါတယ်။ Italy Made ရေခဲမုန့်လေးတွေလည်း ရပါတယ်။
Cafe Dibar (3)
ဒီဆိုင်ကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၅လလောက်ကမှ ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး အမှတ် ၇၆ ၊ဓမ္မာရုံလမ်းထဲမှာ တည်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုင်အဝလေးကအစ ချစ်စရာကောင်းတယ်။ ဆိုင်လေးက ၂ထပ်အိမ်လေးပုံစံကိုမှ တစ်ကယ့် အိမ်ပုံစံလေးနဲ့တူအောင်ပြင်ထားတယ်။ အပေါ်ထပ်မှာလည်း ဗီရို၊ စားပွဲလေးတွေ၊ အပ်ချုပ်စက်လေးတွေ ခေတ်ဟောင်းလက်မှုပစ္စည်းလေးတွေနဲ့အလှဆင်ထားတယ်။ ဝရန်တာလေးတွေလည်း ရှိတော့ ဓါတ်ပုံရိုက်လို့ အရမ်းလှတယ်။ ကိုယ်ရောက်နေချိန်မှာတောင် ဓါတ်ပုံလာရိုက်ကြတဲ့ ကောင်မလေးတွေရှိလေနေရဲ့။ ဒီဆိုင်လေးကိုလူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်ရခြင်းကတော့ ခြံဝန်းလေးနဲ့ ဆိတ်ငြိမ်လမ်းလေးထဲမှာ တည်ရှိပြီး ပိုအနုပညာဆန်ဆန်နဲ့ ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်း ရှိလို့ပါပဲ။
ဆိုင် ၃ ဆိုင်လုံးရဲ့ ရောင်းအားအကောင်းဆုံးတွေထဲက တော်တော်များများကြိုက်ကြတာဆို Seafood Paella Spanish ဆိုတဲ့ ပင်လယ်စာထမင်းကြော်လေးပါ။ ပုစွန်၊ပြည်ကြီးငါး၊ ကမာတွေကို Chili Sauce အနှစ်လေးနဲ့ချက်ပြီး ထမင်းကြော်ပူပူမွှေးမွှေးလေးနဲ့ အနှစ်ဆမ်းထားတာပါ။ ထမင်းသားလေးနည်းနည်း မာနေတာလေးတော့ သိပ်မပြေခဲ့ဘူး။ အရသာကတော့ တကယ်ကောင်းပြီးသူ့ဆီမှာပဲ ရနိုင်တဲ့လက်ရာလေးပါ။ ၆၀၀၀ ကျပ်ပါ။
Seafood Apealla Spanish
အဓိကကတော့ Cheese တွေ ပျော်ဝင်နေတဲ့ Europe စာတွေ၊ Salad တွေများတော့ Menu ထဲမှာတင် ရှာရင်းရွေးရခက်နေရင်တော့ Lasagne ဆိုတဲ့ အီတလီအစားအစာလေးတစ်ခုကို မြည်းခဲ့စေချင်ပါတယ်။ အပေါ်မှာ Mazarella Cheese အနှစ်တွေအလွှာလိုက်ဖြန့်ခင်းထားပြီး အဲ့အောက်မှာမှ ကြက်၊ဝက်၊ အမဲ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အသားကို Tomato Paste လေးနဲ့ ချက်ထားတဲ့ အီတလီခေါက်ဆွဲပြား Pasta ပုံစံလေးပါ။ တစ်ပွဲပမာဏနဲ့တင် အီစိမ့်နေအောင်စားလို့ကောင်းတဲ့ အခြေနေပါ။ မြန်မာပါးစပ်နဲ့ ကိုက်ပါတယ်။ ဈေးနှုန်းကလည်း မြန်မာငွေ ၆၀၀၀ ပဲရှိတာမို့ဆိုင်ရောက်ခဲ့လို့ ဘာစားရမလဲတွေဝေနေရင် ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။
အီတလီစာကောင်းကောင်းလေးဆို Bacon တွေ၊ မှိုတွေနဲ့ Creamy ဖြစ်တဲ့ Cabonara လေးလည်း တော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်။ Pasta ခေါက်ဆွဲသားလေး နည်းနည်းလေး နူးအိရင်တော့ ပိုကောင်းမှာပါ။
Creamy Cabonara with bacon
အီတာစားရင် အချဉ်လေးတစ်ခုခုနဲ့လေ အအီဖြေသင့်တယ်မဟုတ်လား? ဒါဆိုရင်တော့ အသီးအစုံအလင်နဲ့ ရနိုင်တဲ့ သူ့ဆိုင်က ကိုယ်သဘောအကျရဆုံး Smoothie လေးတွေဆိုရင်ရော? သဘောကျဆို သူ့ Smoothie လေးတွေက ကိုယ်လိုချင်တဲ့ Taste အတိုင်း ကွက်တိအရသာချဉ်ချဉ်လေးနဲ့ တော်တော်လန်းဆန်းစေတဲ့အပြင် ပျစ်ပျစ်နှစ်နှစ်လေးဆိုတော့ အရသာတစ်ကယ့်ကို စူးရှရှချဉ်ချဉ်လေးခံစားရမှာပါ။ ဈေးနှုန်းလည်း မြန်မာငွေ ၃၀၀၀ ပါပဲ။
သူ့ဆီမှာ အီတလီလက်ရာ ဒိန်ချဉ်လေးလည်း ရှိပါသေးတယ်။ ပျားရည်လေးနဲ့တွဲသောက်ရတာဖြစ်ပြီး လာချပေးတဲ့အပြင်အဆင်ကိုက ချစ်စရာလေးပါ။ ပျားရည်နံ့ ချိုစူးစူးမွှေးမွှေးလေးကြား မြန်မာဒိန်ချဉ်တွေနဲ့မတူကွဲပြားတဲ့အရသာကို ခံစားရမှာပါ။ သူက ၂၇၀၀ ပါ။
ကျန်တဲ့ Salad တွေ၊ Bites တွေ၊Special Menu တွေနဲ့ Drinks အစုံအလင်နဲ့တစ်နေရာတည်းမှာ Chill ချင်သူတွေအတွက်တော့ Cafe Dibar ဆိုင်တွေဟာ တစ်ကယ့်ကို တိတ်ဆိတ်ငြိမ်းချမ်းတဲ့ ကမ္ဘာလေးတစ်ခုပါ။ Interior Decoration တွေနဲ့ မပြန်ချင်အောင် ဆွဲဆောင်မယ့်နေရာလေးပါ။
တကယ့် အီတလီဆိုင်အခင်းအကျင်းအငွေ့အသက်တွေကြား ဒီနေရာလေးတွေကိုတော့ ရောက်ဖူးသူတိုင်း သဘောကျကျမှာ အသေအချာပါ။ ဝန်ထမ်းလေးတွေလည်း Service ကောင်းပါတယ်။ ဈေးနှုန်းအနေနဲ့ဆိုလည်း မဆိုးဘူးဆိုတဲ့ထဲ ပါဝင်ပါတယ်။ လူငယ်တွေအတွက်ဆိုရင်တော့ Cafe Dibar (2) နဲ့ (3) က အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ပြီး၊ လူကြီးတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ ရန်ကင်းဆိုင်က ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။ ဆိုင် (၃) ခုလုံး မနက် ၁၀ နာရီမှ ည ၉ နာရီခွဲထိဖွင့်ပါတယ်။ တစ်ခါလောက်တော့ အီတလီယဉ်ကျေးမှုကို ဒီကော်ဖီဆိုင်လေးတွေကနေ ရှာဖွေကြည့်လိုက်ရအောင်လား။
စနေ၊တနင်ျဂနှတေို့ရဲ့ အလှဆုံး နိဗ်ဗာနျဘုံလေး (သို့) “Cafe’s DiBar” တို့ရဲ့ ကမ်ဘာ
ကိုယျက Classical Art တှထေဲ မြောပါတတျသူလား?
Retro, Vintage Style တှကေို ရူးသှပျသူလား?
သမာရိုးကြ စနေ၊ တနင်ျဂနှတှေကွေားမှာဘဲ ဘဝကို မွုပျနှံထားသူလား?
ဒါဆိုရငျတော့ ဒီစာလေးကနပေဲ ရနျကုနျမွို့ထဲကနေ Vintage အငှသေ့ကျတှေ ဖုံးလှမျးနတေဲ့ အီတလီကျောဖီဆိုငျလေးတှေ ကိုချေါသှားပါရစေ။
နံရံကပျပနျးခြီကားလေးတှေ၊ ရှေးခတျေ အင်ျဂလိပျကွျောငွာစာရှကျလေးတှေ၊ ပနျးခွောကျတှေ၊ အိမျသုံးလကျမှုပစ်စညျးတှေ၊ Cheeseတှေ၊ ဖနျပုလငျးလှလှလေးတှေ၊ ပနျးတှေ၊ Pasta တှနေဲ့ Wine ခြိုမွမွတှကေ ကိုယျ ရနျကုနျမှာရှိနတောပါလားဆိုတာကို ခနမသှေ့ားမိစလေောကျအောငျ ညို့ငငျနမေယျဆိုရငျရော?
ရနျကုနျက ကျောဖီဆိုငျတှထေဲကမှ အလှဆုံး၊ အနုပညာအဆနျဆုံးနဲ့ ဆိုငျခှဲ ၃ ခုထိအောငျအောငျမွငျမွငျဖှငျ့လှဈနိုငျခဲ့တဲ့ Cafe Dibar ဟာဆိုရငျ ကျောဖီခဈြသူတှေ၊ Vintage ဆနျဆနျလူနမှေုမွတျနိုးသူတှကွေားထဲမှာ တစတစ လှမျးမိုးနရောယူလာခဲ့တာ ခုဆိုရငျ နာမညျတဈခုနဲ့ အခိုငျအမာရပျတညျလာနိုငျခဲ့တဲ့အထိပါပဲ။
ဆိုငျ ၃ဆိုငျ ဖွဈတဲ့အလြောကျ နရောအနအေထား အနညျးငယျကှာခွားပမေယျ့ အပွငျအဆငျကတော့ အားလုံး Theme တဈခုတညျးအောကျမှာ အနုပညာဆနျဆနျ ဖနျတီးထားတာ အံ့ခြီးဖှယျရာပါပဲ။
ပထမဆုံး ဖှငျ့လှဈခဲ့တဲ့ ဆိုငျကတော့ ကမ်ဘာအေးဘုရားလမျးနဲ့ ကနျဘဲ့လမျးထိပျကဆိုငျလေးဖွဈပွီး လမျးမတနျးပျေါမှာ ဖွဈလို့ အစညျကားဆုံးနဲ့ အစားအစာ အစုံလငျဆုံးဆိုငျလေးပါ။ အရငျ တက်ကသိုလျရိပျသာလမျးကနေ ပွောငျးလာတာဖွဈပွီး အီတလီနဲ့ European အစားအစာအစုံအလငျကို ရနိုငျတဲ့ဆိုငျလညျး ဖွဈပါတယျ။ တခွားဆိုငျလေးတှနေဲ့မတူတာက လူကွီးမိတျဆှအေပေါငျးအသငျးတှေ၊ နိုငျငံခွားသားတှေ အလုပျကိစ်စနဲ့ တှဆေုံ့ကွ၊ စုစညျးကွတဲ့ နရောလညျး ဖွဈပါသေးတယျ။ အားသာခကျြကတော့ ဆိုငျ ၃ ဆိုငျလုံးမှာ Menu အစုံလငျဆုံးနဲ့ လမျးမတနျးပျေါမို့ လာရအဆငျပွပွေီး အားနညျးခကျြအနနေဲ့ဆိုလူစညျတတျပွီး နလေ့ညျခငျး အခြိနျတှတေော့ လူနညျးနညျးပွညျ့နတေတျပါတယျ။
လူငယျတှကွေားထဲ ပြံ့နှံ့လာခဲ့တဲ့ ဆိုငျလေးတှကေတော့ စမျးခြောငျး၊ ပနျးခွံလမျးထဲက Cafe Dibar နဲ့ မွနေီကုနျး ဓမ်မာရုံလမျးထဲက Cafe Dibar တို့ပဲဖွဈပါတယျ။
ဒီဆိုငျလေးကတော့ စမျးခြောငျး၊ ပနျးခွံလမျး၊ အမှတျ ၁၇ မှာတညျရှိပွီး မကျြနှာကကျြနိမျ့နိမျ့လေးနဲ့ ၂ထပျအိမျပုံစံလေး အလှဆငျထားတာဖွဈပါတယျ။ လူငယျတှေ သဘောကကြွတဲ့ ဆိုငျလေးဖွဈပွီး မူလဆိုငျထကျတော့ Menu နညျးနညျးလြော့ထားတာမို့ Pasta၊ Pizza နဲ့ Salad တှေ၊ Wine တှေ၊ Juice တှကေို အဓိက ထားရောငျးပါတယျ။
ဆိုငျအပွငျအဆငျလေးက ဝငျတဲ့သူတိုငျး ငွိလောကျမှာ အသခြောပါ။ Modernism ဖွဈတယျ။ Classic ဖွဈတယျ။ လုံးဝသခြောပေါကျအာမခံနိုငျတာကတော့ တိတျဆိတျငွိမျသကျပွီး လှငျ့လို့ကောငျးမယျ့နရောပါပဲ။ စာသမား၊ ကဗြာသမားတှေ အတှေးတဆုံးဖွနျ့ကကျြလို့ရမယျ့ နရောလှလှလေးပါ။
အစားအသောကျအတှကျဆို နရောလေးက နိုငျငံခွားသားသဘောကြ နရောလေးဖွဈနတေဲ့အပွငျ ဆိုငျရဲ့ Culture ကိုက အီတလီကဖေးပုံစံလေးမို့ အီတလီစာတှေ Pasta ၊ Wine နဲ့ Drinks တှတေျောတျောမြားမြား ရပါတယျ။ Italy Made ရခေဲမုနျ့လေးတှလေညျး ရပါတယျ။
ဒီဆိုငျကတော့ လှနျခဲ့တဲ့ ၅လလောကျကမှ ဖှငျ့လှဈခဲ့တာဖွဈပွီး အမှတျ ၇၆ ၊ဓမ်မာရုံလမျးထဲမှာ တညျရှိတာဖွဈပါတယျ။
ဆိုငျအဝလေးကအစ ခဈြစရာကောငျးတယျ။ ဆိုငျလေးက ၂ထပျအိမျလေးပုံစံကိုမှ တဈကယျ့ အိမျပုံစံလေးနဲ့တူအောငျပွငျထားတယျ။ အပျေါထပျမှာလညျး ဗီရို၊ စားပှဲလေးတှေ၊ အပျခြုပျစကျလေးတှေ ခတျေဟောငျးလကျမှုပစ်စညျးလေးတှနေဲ့အလှဆငျထားတယျ။ ဝရနျတာလေးတှလေညျး ရှိတော့ ဓါတျပုံရိုကျလို့ အရမျးလှတယျ။ ကိုယျရောကျနခြေိနျမှာတောငျ ဓါတျပုံလာရိုကျကွတဲ့ ကောငျမလေးတှရှေိလနေရေဲ့။ ဒီဆိုငျလေးကိုလူကွိုကျအမြားဆုံးဖွဈရခွငျးကတော့ ခွံဝနျးလေးနဲ့ ဆိတျငွိမျလမျးလေးထဲမှာ တညျရှိပွီး ပိုအနုပညာဆနျဆနျနဲ့ ကယျြကယျြဝနျးဝနျး ရှိလို့ပါပဲ။
ဆိုငျ ၃ ဆိုငျလုံးရဲ့ ရောငျးအားအကောငျးဆုံးတှထေဲက တျောတျောမြားမြားကွိုကျကွတာဆို Seafood Paella Spanish ဆိုတဲ့ ပငျလယျစာထမငျးကွျောလေးပါ။ ပုစှနျ၊ပွညျကွီးငါး၊ ကမာတှကေို Chili Sauce အနှဈလေးနဲ့ခကျြပွီး ထမငျးကွျောပူပူမှေးမှေးလေးနဲ့ အနှဈဆမျးထားတာပါ။ ထမငျးသားလေးနညျးနညျး မာနတောလေးတော့ သိပျမပွခေဲ့ဘူး။ အရသာကတော့ တကယျကောငျးပွီးသူ့ဆီမှာပဲ ရနိုငျတဲ့လကျရာလေးပါ။ ၆၀၀၀ ကပျြပါ။
အဓိကကတော့ Cheese တှေ ပြျောဝငျနတေဲ့ Europe စာတှေ၊ Salad တှမြေားတော့ Menu ထဲမှာတငျ ရှာရငျးရှေးရခကျနရေငျတော့ Lasagne ဆိုတဲ့ အီတလီအစားအစာလေးတဈခုကို မွညျးခဲ့စခေငျြပါတယျ။ အပျေါမှာ Mazarella Cheese အနှဈတှအေလှာလိုကျဖွနျ့ခငျးထားပွီး အဲ့အောကျမှာမှ ကွကျ၊ဝကျ၊ အမဲ ကိုယျကွိုကျတဲ့အသားကို Tomato Paste လေးနဲ့ ခကျြထားတဲ့ အီတလီခေါကျဆှဲပွား Pasta ပုံစံလေးပါ။ တဈပှဲပမာဏနဲ့တငျ အီစိမျ့နအေောငျစားလို့ကောငျးတဲ့ အခွနေပေါ။ မွနျမာပါးစပျနဲ့ ကိုကျပါတယျ။ ဈေးနှုနျးကလညျး မွနျမာငှေ ၆၀၀၀ ပဲရှိတာမို့ဆိုငျရောကျခဲ့လို့ ဘာစားရမလဲတှဝေနေရေငျ ရှေးခယျြသငျ့ပါတယျ။
အီတလီစာကောငျးကောငျးလေးဆို Bacon တှေ၊ မှိုတှနေဲ့ Creamy ဖွဈတဲ့ Cabonara လေးလညျး တျောတျောအဆငျပွပေါတယျ။ Pasta ခေါကျဆှဲသားလေး နညျးနညျးလေး နူးအိရငျတော့ ပိုကောငျးမှာပါ။
အီတာစားရငျ အခဉျြလေးတဈခုခုနဲ့လေ အအီဖွသေငျ့တယျမဟုတျလား? ဒါဆိုရငျတော့ အသီးအစုံအလငျနဲ့ ရနိုငျတဲ့ သူ့ဆိုငျက ကိုယျသဘောအကရြဆုံး Smoothie လေးတှဆေိုရငျရော? သဘောကဆြို သူ့ Smoothie လေးတှကေ ကိုယျလိုခငျြတဲ့ Taste အတိုငျး ကှကျတိအရသာခဉျြခဉျြလေးနဲ့ တျောတျောလနျးဆနျးစတေဲ့အပွငျ ပဈြပဈြနှဈနှဈလေးဆိုတော့ အရသာတဈကယျ့ကို စူးရှရှခဉျြခဉျြလေးခံစားရမှာပါ။ ဈေးနှုနျးလညျး မွနျမာငှေ ၃၀၀၀ ပါပဲ။
သူ့ဆီမှာ အီတလီလကျရာ ဒိနျခဉျြလေးလညျး ရှိပါသေးတယျ။ ပြားရညျလေးနဲ့တှဲသောကျရတာဖွဈပွီး လာခပြေးတဲ့အပွငျအဆငျကိုက ခဈြစရာလေးပါ။ ပြားရညျနံ့ ခြိုစူးစူးမှေးမှေးလေးကွား မွနျမာဒိနျခဉျြတှနေဲ့မတူကှဲပွားတဲ့အရသာကို ခံစားရမှာပါ။ သူက ၂၇၀၀ ပါ။
ကနျြတဲ့ Salad တှေ၊ Bites တှေ၊Special Menu တှနေဲ့ Drinks အစုံအလငျနဲ့တဈနရောတညျးမှာ Chill ခငျြသူတှအေတှကျတော့ Cafe Dibar ဆိုငျတှဟော တဈကယျ့ကို တိတျဆိတျငွိမျးခမျြးတဲ့ ကမ်ဘာလေးတဈခုပါ။ Interior Decoration တှနေဲ့ မပွနျခငျြအောငျ ဆှဲဆောငျမယျ့နရောလေးပါ။
တကယျ့ အီတလီဆိုငျအခငျးအကငျြးအငှအေ့သကျတှကွေား ဒီနရောလေးတှကေိုတော့ ရောကျဖူးသူတိုငျး သဘောကကြမြှာ အသအေခြာပါ။ ဝနျထမျးလေးတှလေညျး Service ကောငျးပါတယျ။ ဈေးနှုနျးအနနေဲ့ဆိုလညျး မဆိုးဘူးဆိုတဲ့ထဲ ပါဝငျပါတယျ။ လူငယျတှအေတှကျဆိုရငျတော့ Cafe Dibar (2) နဲ့ (3) က အသငျ့တျောဆုံးဖွဈပွီး၊ လူကွီးတှအေတှကျဆိုရငျတော့ ရနျကငျးဆိုငျက ပိုအဆငျပွပေါတယျ။ ဆိုငျ (၃) ခုလုံး မနကျ ၁၀ နာရီမှ ည ၉ နာရီခှဲထိဖှငျ့ပါတယျ။ တဈခါလောကျတော့ အီတလီယဉျကြေးမှုကို ဒီကျောဖီဆိုငျလေးတှကေနေ ရှာဖှကွေညျ့လိုကျရအောငျလား။